Isiko lamaDatshi: umngcipheko kunye neziphumo zokuzisa ...
Blog » Amasiko amaDatshi: umngcipheko kunye neziphumo zokuzisa iimveliso ezingavumelekanga eNetherlands
Amasiko amaDatshi: umngcipheko kunye neziphumo zokuzisa iimveliso ezingavumelekanga eNetherlands
Xa undwendwela ilizwe langaphandle ngenqwelomoya, yinto eqhelekileyo ukuba umntu apase amasiko kwisikhululo seenqwelomoya. Abantu abatyelele eNetherlands kuye kufuneke bapase amasiko ngokomzekelo iSchiphol Airport okanye i-Eindhoven Airport. Rhoqo kwenzeka ukuba iibhegi zabakhweli zibe neemveliso ezingavumelekanga, ezingena kwiNetherlands ngenjongo okanye ngenxa yokungazi okanye ukungathobeli. Ngaphandle kwesizathu, iziphumo zezi zenzo zinokuba nzima. ENetherlands, urhulumente unike isiko igunya elikhethekileyo lokukhupha izohlwayo zolwaphulo-mthetho okanye ezolawulo ngokwazo. La magunya abekwe phantsi komthetho iAlgemene Douanewet (i-General Customs Act). Ngakumbi zeziphi izohlwayo ezikhoyo kwaye zinokuba nzima kangakanani ezo zohlwayo? Yifunde apha!
I-Algemene Douanetwet '
Umthetho wolwaphulo-mthetho waseDatshi ngokubanzi uyazi umgaqo wokufumana indawo. IKhowudi yoLwaphulo-mthetho lwaseDatshi iqulathe isibonelelo esichaza ukuba le Khowudi isebenza kuye wonke umntu owenza into yolwaphulo-mthetho eNetherlands. Oku kuthetha ukuba ubuzwe okanye ilizwe ahlala kulo umntu owonileyo alikho imigaqo enokuthathwa. I-Algemene Douanewet isekwe kwimigaqo efanayo kwaye isebenza kwiziko elithile-iimeko ezenzeka ngaphakathi komda weNetherlands. Apho iAlgemene Douanewet ingaboneleli ngemithetho ethile, umntu unokuxhomekeka kumalungiselelo ngokubanzi phakathi kwezinye iKhowudi yoLwaphulo-mthetho lwaseDatshi ('Wetboek van Strafrecht') kunye noMthetho Jikelele woLawulo loLawulo ('Algemene Wet Bestuursrecht' okanye 'Awb'). KwiAlgemene Douanewet kukho ugxininiso kwizohlwayo zolwaphulo-mthetho. Ngaphaya koko, kukho umohluko kwiimeko apho iintlobo ezahlukeneyo zesohlwayo zinokubekwa khona.
Kunokubekwa isohlwayo sokulawula: xa iimpahla zingenziwa kumasiko, xa umntu engahambelani nemigaqo yelayisensi, xa kungabikho mpahla kwindawo yokugcina izinto, xa imigqaliselo yokugcwalisa iinkqubo zokwenza izinto zexabiso ezilungiselelwe i-EU azikho. sadibana kwaye xa iimpahla zingakhange zifike ngexesha elifanelekileyo. Intlawulo yolawulo inokufikelela kubude be- + EUR 300, -, okanye kwezinye iimeko ukuphakama kwe-100% yexabiso lemisebenzi.
Kusenokwenzeka ukuba isigwebo solwaphulo-mthetho siya kubekwa xa iimpahla zingavumelekanga zingene eNetherlands ngokufika kwisikhululo seenqwelomoya. Ukohlwaywa kolwaphulo-mthetho ngokomzekelo kunokumiselwa xa iimpahla zingeniswa ngaphakathi kwi-Netherlands ukuze ngokomthetho zingangeniswa okanye zibhengezwe ngendlela engalunganga. Ngaphandle kwale mizekelo yezenzo zolwaphulo-mthetho, iAlgemene Douanewet ichaza uluhlu lwezinye izenzo zolwaphulo-mthetho. Ityala lolwaphulo-mthetho linokufikelela kwinqanaba eliphakamileyo le-EUR 8,200 okanye ukuphakama kwenani lemisebenzi eyekisiweyo, xa eli nani liphezulu. Kwimeko yezenzo eziqhutywa ngabom, eyona ntlawulo iphantsi kweAlgemene Douanewet inokufikelela kubude be-EUR 82,000 okanye ukuphakama kwenani lemisebenzi eyekisiweyo, xa eli nani liphezulu. Ngamanye amaxesha, i-Algemene Douanewet ibeka isigwebo sentambo. Kwimeko enjalo, isenzo okanye okushiyekileyo kunokubonwa njengolwaphulo-mthetho. Xa i-Algemene Douanewet ingabeki isigwebo sentambo kodwa ihlawulisa kuphela, isenzo okanye okushiyekileyo kunokubonwa njengecala. Esona sigwebo sikhulu sasejele sibandakanywe kwiAlgemene Douanewet sisigwebo seminyaka emithandathu. Xa iimpahla ezingavumelekanga zingeniswa eNetherlands, isohlwayo sinokugweba iminyaka emine. Isohlwayo kwimeko enjalo sinokufumana i-EUR 20,500.
Inkqubo yolawuloInkqubo yolawulo yahlukile kwinkqubo yolwaphulo-mthetho. Kuxhomekeka kubungakanani besenzo, inkqubo yolawulo inokuba lula okanye ibe nzima ngakumbi. Kwimeko yezenzo ekuhlawuliswa isohlwayo esingaphantsi kwe-EUR 340, -, inkqubo iya kuhlala ilula. Xa ityala liqapheleke ukuba ityala linyanzelisiwe, iya kwaziswa kumntu lowo uchaphazelekayo. Isaziso siqulethe iziphumo. Kwimeko yezenzo apho isohlwayo singaphakama kune-EUR 340, -le nkqubo-eneenkcukacha ezininzi kufuneka ilandelwe. Okokuqala, umntu obandakanyekayo kufuneka afumane isaziso esibhaliweyo senjongo yokunyanzelwa ukuba ahlawulwe. Oku kumnika ithuba lokuxhathisa isohlwayo. Emva koko kuyakugqitywa (kwiiveki ezili-13) ukuba kuya kubekwa isohlwayo okanye akunjalo. ENetherlands umntu unokuphikisa isigqibo sequmrhu elilawulayo (umhloli) kwiiveki ezintandathu emva kwesigqibo. Isigqibo siya kujongwa kwakhona kwisithuba seeveki ezintandathu. Emva koko, kunokwenzeka ukuba uthathe isigqibo enkundleni.
Inkqubo yolwaphulo-mthethoXa ityala lolwaphulo-mthetho lifunyenwe, ingxelo esemthethweni iya kwenziwa, kusenziwa isicelo esikhutshiweyo. Xa kukhutshwa isohlwayo esinexabiso elingaphezulu kwe-EUR 2,000, umtyholwa kufuneka aviwe kuqala. Ikopi yomyalelo wokunikwa isohlwayo iya kunikezelwa kulowo utyholwayo. Umhloli okanye igosa elichongiweyo liya kumisela ixesha ekufuneka ihlawulwe ngalo. Emva kweentsuku ezilishumi elinesine emva kokufumana ikopi yomyalelo wesohlwayo ngumrhanelwa, isohlwayo siyaphindeka. Xa umrhanelwa engavumelani nomyalelo wohlwayo, unakho ukungamelana nomyalelo wenkundla kwisebe lezotshutshiso loluntu kwiveki ezimbini. Oku kuya kubangela ukuba ityala liphinde liqwalaselwe, emva koko irhoxisiwe, okanye itshintshwe okanye inokubizwa enkundleni. Inkundla iyakuthatha isigqibo sokuba kwenzeka ntoni. Kwiimeko ezingaginyisi mathe, ingxelo yaseburhulumenteni njengoko ichaziwe kwisivakalisi sokuqala somhlathi odlulileyo kufuneka ithunyelwe kuqala kumtshutshisi woluntu, onokuthi ke athathe eli tyala. Umtshutshisi woluntu unokuthatha isigqibo sokubuyisela ityala kumhloli. Xa umyalelo wesigwebo ungahlawulwanga, isigwebo sentambo sinokulandela.
Isikhokelo sesohlwayo sifakiwe kwiAlgemene Douanewet. Ubungakanani obuthile bazohlwayo bugqitywa ngumhloli okanye ligosa elityunjiweyo okanye umtshutshisi woluntu (owokugqibela kuphela kwimeko yesenzo solwaphulo-mthetho), kwaye uya kubekwa phantsi ngomyalelo wesohlwayo (strafbeschikking) okanye isigqibo sezolawulo (beschikking ). Njengoko kuchaziwe ngaphambili, umntu unokuphakamisa inkcaso kwisigqibo solawulo ('bezwaar maken') kwisebe lolawulo okanye umntu unokumelana nesohlwayo somtshutshisi woluntu. Emva kokuchasa kwetyala, inkundla iyakupasisa isigwebo malunga noku.
Zibekwa njani ezohlwayo?
Umyalelo wesigwebo okanye isigqibo solawulo sihlala silandela okwethutyana emva kwesigameko, njengoko kuthatha umsebenzi othile wenkqubo / wolawulo ukubeka lonke ulwazi oluchanekileyo ephepheni. Nangona kunjalo, yinto eyaziwayo ephantsi komthetho waseDatshi (ngakumbi umthetho wolwaphulo-mthetho waseDatshi) ukuba, phantsi kweemeko, kunokwenzeka ukuhlawula ii-odolo zezohlwayo kwangoko. Umzekelo olungileyo kukuhlawulwa ngokuthe ngqo kwee-odolo zezohlwayo kwimeko yokufumana iziyobisi kwimikhosi yamaDatshi. Oku, nangona kunjalo, akunakucetyiswa, njengoko ukuhlawula izohlwayo kuqinisekisa ukwamkelwa kwetyala, kwaye kunokubakho iziphumo ezinjengerekhodi lolwaphulo-mthetho. Nangona kunjalo, kuyacetyiswa ukuhlawula okanye ukuxhathisa isohlwayo ngexesha elinikiweyo. Xa emva kwezikhumbuzo ezininzi isigwebo asihlawulwanga, umntu uyakuhlala efowuna ngoncedo lwebheyile ukuba ayifumane kwakhona. Xa oku kungangqineki kusebenza, isigwebo sentambo sinokulandela.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye izimvo emva kokufunda eli nqaku, zive ukhululekile ukunxibelelana mr. UMaxim Hodak, igqwetha-mthetho-kwa- Law & More ngokusebenzisa [imeyile ikhuselwe] okanye Mnu. UTom Meevis, igqwetha-lomthetho kwi Law & More ngokusebenzisa [imeyile ikhuselwe] okanye usitsalele umnxeba ku +31 (0) 40-3690680.
Post edlulileyo Iindleko zokusebenzisa ifowuni yakho esiphathwayo phesheya ziyancipha ngokukhawuleza
Post Next Kule mihla, i-hashtag ayithandwa kuphela ku-Twitter naku-Instagram…